Ababukeli bemifanekiso abaza kuyisebenzisa kwisiphelo seBuntu | Ubunlog
Ababukeli bemifanekiso ukuba basebenzise kwisiphelo sendlela Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ezinye Ababukeli bemifanekiso yokusetyenziswa kwisiphelo sendlela. Namhlanje abasebenzisi banokufumana usetyenziso oluninzi lwe-GUI ukujonga imifanekiso kwi-Gnu / Linux. Kulungile, kodwa xa uchitha ixesha lakho elininzi kwisiphelo sendlela kwaye usebenza nemifanekiso emininzi, kunokuba nzima ukubachonga bonke.
Njengesiqhelo kwilizwe le-Gnu / Linux, abanye abantu behle beza kusebenza ukuze bakwazi ukubonelela ngezinye iindlela esivumela ukuba sibone imifanekiso kwisiphelo sendlela. Kule migca ilandelayo siza kujonga Ababukeli bemifanekiso emi-3 ye-CLI. Akukho mntu ulindele inkcazo ephezulu okanye nantoni na enjalo. Ezi zicelo zinokuba luncedo kubasebenzisi abajonge ukusebenzisa ezinye iindlela ze-CLI kwizicelo ze-GUI kwaye bahlala ixesha elininzi kwisiphelo.
1 Ababukeli bemifanekiso yesiphelo
1.1 Ukuboniswa komfanekiso kwiXesha lokugqibela usebenzisa i-FIM
1.1.1 Faka iFIM
1.1.2 Sebenzisa i-FIM
1.2 Ukujonga imifanekiso kwiTheminali usebenzisa iVu
1.2.1 Faka iVu
1.2.2 Sebenzisa iVu
1.3 Ukujonga imifanekiso kwiXesha lokugqibela usebenzisa iLsix
Ababukeli bemifanekiso yesiphelo
Ukuboniswa komfanekiso kwiXesha lokugqibela usebenzisa i-FIM
I-FIM imele i-Fbi Iphuculwe kwaye sebenzisa inkqubo yesakhelo ukubonisa imifanekiso ngqo kwilayini yomyalelo. Ngokuzenzekelayo, iyabonisa bmp, gif, jpeg, PhotoCD, png, ppm, tiff kunye xwd. Kwezinye iifomathi, ziya kuzama ukusebenzisa isiguquli se-ImageMagick. Eli ziko lenziwa ngokwezifiso kakhulu, licwangciswe, kwaye lilula xa kuthelekiswa nababukeli bemifanekiso be-GUI.
Ibonisa imifanekiso kwiscreen esigcweleyo kwaye inokulawulwa kusetyenziswa iindlela ezimfutshane zekhibhodi. I-FIM isimahla kwaye ingumthombo ovulekileyo. Banokubonwa iimpawu ezingaphezulu kwinqaku elishicilelwe ngaphambili kule bhlog.
Umbonisi womfanekiso I-FIM iyafumaneka kwiindawo zokugcina ezisekwe kwi-DEB njengoBuntu, iLinux Mint. Siza kuba nakho ukuyifaka ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sisebenzisa lo myalelo:
Ukuba uthanda khuphela, qokelela kwaye ufake kumthombo Ungalandela imiyalelo echazwe kwicandelo elinesihloko 'Khuphela kwaye wakhe imiyalelo'enokufundwa kwi- amaxwebhu asemthethweni.
Nje ukuba ufake, unga bonisa umfanekiso ngokhetho 'oluzenzekelayo' usebenzisa lo myalelo:
Ngolwazi oluthe kratya, ungabhekisa kumaphepha encwadi.
Ukujonga imifanekiso kwiTheminali usebenzisa iVu
I-Viu sesinye isicelo somgca wokuyalela ukujonga imifanekiso kwisiphelo sendlela. Ngaba Isimahla, evulekileyo yomthombo womboniso weCLI obhalwe ngolwimi lwenkqubo yokuRusa.
Sebenzisa iVu sinokubona ezona ntlobo zemifanekiso zidumileyo, kubandakanya .jpg, .png, gif, njl. Ikwavumela ukuba ujonge imifanekiso kubungakanani besiko kwaye ujonge imifanekiso ngokuthe ngqo kumaqonga okubamba imifanekiso, njenge-tinypic.
Kuba i-Viu ibhaliwe kunye neRust, sinako yifake usebenzisa umphathi wempahla yeCargo. Emva faka iRust Kwi-Ubuntu, sebenzisa lo myalelo ulandelayo ukuze ufake iVu:
UVuyi naye iyafumaneka njengebhanari edityanisiweyo. Kuya kufuneka ukhuphele ingxelo yokugqibela evela kwifayile ye- iphepha lokukhupha. Ngokubhala, ingxelo yokugqibela ingu-0.2.1.
Emva kokukhuphela ifayile ye-Viu yokubini, yenze isebenze Ukuchwetheza kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Y ishukumisele emendweni / usr / yendawo / ibini.
Sebenzisa iVu kungqale. Kufuneka nje bhala viu elandelwa yindlela yomfanekiso kwaye ucinezela u-Enter.
Esi sixhobo sinakho bonisa umfanekiso kunye nobukhulu besiko usebenzisa i-- h iinketho (Ukuphakamaokanye -w (Ibanzi) njengoko kubonisiwe koku kulandelayo:
ukuba jonga imifanekiso emininzi, enye emva kwenye, igcinwe ngaphakathi kwifolda, Kuya kufuneka usebenzise oonobumba bekhadi lasendle njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Njengoko besele nditshilo, uVui uyakwazi ukubonisa imifanekiso yeefomathi ezahlukeneyo. Umzekelo, lo myalelo ulandelayo ingabonisa umfanekiso we-gif usebenzisa iVu:
Siya kuba nakho uku jonga imifanekiso evela kwiindawo zokubamba imifanekiso, ezinje nge-tinypic. Ukubona umfanekiso kwisiphelo sendlela, kuya kufuneka uchwetheze into elandelayo:
ukuba fumana iinkcukacha ezithe kratya malunga neVi, ungaqhagamshelana necandelo loncedo ngokuchwetheza lo myalelo:
Ukujonga imifanekiso kwiXesha lokugqibela usebenzisa iLsix
Ngokungafaniyo nababukeli bemifanekiso emibini yangaphambili, I-Lsix iya kubonisa kuphela izithonjana kwisiphelo sendlela. Le nto iya kuba yinto efana nomyalelo 'ls'Kwiinkqubo ezifana ne-Unix, kodwa kuphela kwimifanekiso. Kuba wazi ngakumbi ngeLsix ungabonisana Inqaku ukuba sabhala kule blog kwithuba elidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ababukeli bemifanekiso ukuba basebenzise kwisiphelo sendlela Ubuntu
Inguqulelo entsha yoPhicotho-zincwadi 2.3.2 sele ikhutshiwe